Maxaa Ka Hortaagan Amniga Somaliya Iyo Horumarka ? -
HomeArimaha bulshadaMaxaa Ka Hortaagan Amniga Somaliya Iyo Horumarka ?
Maxaa Ka Hortaagan Amniga Somaliya Iyo Horumarka ?
November 15, 2018 F.G Arimaha bulshada, Wararka 0
Dalka Soomaaliya ayaa marar badan Waxa uu kaalinta kowaad ama labaad ka galaa dalal aduunka ugu musuqmaasuq badan. Waana arrinta ugu weyn dhinaca musuqmaasuqa iyo wax is dabamarinta.
Sidoo kale Waxaana xusid mudan in qabiilka iyo musuqmaasuqu yahay labo aan kala maarmin. Hase ahaate Waxaa qofka lagula taliyaa in uu meesha uu joogo uu dhaqaalo ka qabsado hadii kale beri laga qaadayo waana nasiib daro ku dhacday umada somaliyeed haddi ay ahaan laheeyd midka u shaqeeya dowlada hadii ay ahaan laheed kuwa ganacsiga shirkada ah ,dhamaantoo waxa ay faraha kula jiraa wax isdaba marin.
Adeeg bulsho iyo horumar la’aan: dhibaatooyinka musuqmaasuqu keeno waxaa ka mid ah in dhaqaalihii loogu talo galay adeegyada bulshada ee asaasiga ah sida caafimaadka, biyaha, waxbarashada, wadooyinka iyo korontada ay ku dhacdaan jeeb iyo akoon qof ama koox gaar ah ay leedahay. Marka dhaqaalihii lagu fulin lahaa adeegyada asaasiga ee bulshada waxaa dadku soo wajahda dhibaatooyinka keena dhimasho, aqoon daro iyo horumar la’aan. Musuqmaasuqa iyo daciifnimo hay’addaha dowladda ayaa waxay keentaa in bulshadu aaney wax adeeg bulsho la taaban karo